सेलाङमा पहिले विद्यार्थी नभएर समस्या, अहिले भएर समस्या ! – Kathmandutoday.com
सेलाङमा पहिले विद्यार्थी नभएर समस्या, अहिले भएर समस्या !
काठमाण्डु टुडे २०७२ भदौ ३ गते १३:५४ मा प्रकाशित
सिन्धुपाल्चोक, ३ भदौ –सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सेलाङ गाविस–२ मा भूकम्प जानुअघि गोरखनाथ प्राथमिक विद्यालयको जीर्ण भवनका कक्षाकोठामा विद्यालयभरिनै जम्मा ११ विद्यार्थीलाई दुई शिक्षकले अध्यापन गराउने गर्दथे ।
विद्यार्थीको संख्या हाजिरकापीमा जम्मा ११ जना रहेको सो विद्यालयमा धेरैजसो दिन शिक्षकले मात्र विद्यालय कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय दिनमा आधा सङ्ख्यामा उपस्थित हुने विद्यार्थीलाई शिक्षक पढाउन बाध्य हुन्थे । त्यतिबेला शिक्षकलाई दिन कटाउन गाह्रो पथ्र्यो । कुनै समय शिक्षकलाई विद्यालय कुरेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।
उक्त विद्यालयका शिक्षकलाई पहिले दिउँसो देखेको अवस्था अहिले एकादेशको कथा बनेको छ । न्यून विद्यार्थी भएकैले झन्डैझन्डै अर्को कुनै नजिकैको विद्यालयसँग गाभिन लागेको उक्त विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी चापका कारण शिक्षकलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ ।
विद्यार्थी राख्ने स्थानको अभाव मात्र हैन शिक्षक नभएकाले पढाउन मुस्किल भएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित यो विद्यालयमा भूकम्पपछि एक्कासि विद्यार्थी बढेका छन् । भूकम्पअघिको विद्यार्थी संख्या तुलना गर्ने हो भने यो विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी हाजिरकापीको तथ्यांकले एक हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको देखाउँछ । तर शिक्षक भने उही दुई जना मात्र रहेका छन् ।
भूकम्पले गोरखनाथ प्राविलाई समेत विस्थापित बनायो । विद्यालयसँगै रहेका सबै घर मात्र विस्थापित बनेनन् उनीहरु पहिले बसोबास गरेको स्थानभन्दा दुई किलोमिटर पर सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् । समुदाय त्यहीँ बनेपछि स्थानीयवासीले विद्यालयसमेत त्यहीँ राखेर बालबालिकालाई पढाउन थालेका छन् ।
हिमाली गाउँ सेलाङस्थित बाँसखर्कमा नयाँ बस्ती बस्न थालेपछि वरपरका पनि विद्यार्थी आउन थालेका छन् । आफ्नो गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा भएपछि स्याउलेको लप्टे, गोल्चे, गुम्बा, पाङ्ताङ अनि सेलाङकै विभिन्न स्थानबाट बाँसखर्क आउने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । समुदाय ठूलो भएपछि त्यहाँ रहेका बालबालिका धेरैजसो त्यही गोरखनाथ प्राविमा भर्ना भए । अहिले विद्यार्थी संख्या१०५ पुगेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलाबहादुर सिलवालले बताए ।उनी भन्छन्, ‘पहिले विद्यार्थी नहुँदा समस्या थियो, अहिले भएर समस्या भएको छ, विद्यालय भएपछि भर्ना हुन आउनेलाई नलिन पनि नमिल्ने, तर अहिले भने भर्ना रोकेका छौँ ।’
‘११ जनालाई पढाउँदै आएको विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी हाजिरकापीमा १०५ को संख्या पुगिसकेको छ । विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भई आउनेको संख्या अझै बढ्दैछ । विस्थापित बढेसँगै विद्यालयमा भर्ना हुन आउने बालबालिकाको संख्या पनि बढ्दै गएको हो । भर्ना हुनका लागि अन्य गाविसबाट स्थानान्तरण प्रमाणपत्र र गाविसको सिफारिस मागेका छौँ । तर हामीले बालबालिकालाई अध्ययन गर्नबाट भने वञ्चित गरेका छैनौँ’, सिलवाल भने ।
शिक्षा कार्यालयमा सम्झौता गरेर यो गाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न फेज नेपाल नामक संस्था गएको छ । फेजले दिएका दुईवटा टेन्टमा बालबालिका अध्ययन गर्ने गर्दछन् । सानासाना टेन्टमा साँघुरो गरी बसेर अध्ययन गर्न बालबालिका बाध्य बनेका छन् । साँघुरो ठाउँमा बहुकक्षा शिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा असर पर्ने र शिक्षककै अभावका कारण बालबालिकाले राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाएको उक्त गाउँका अभिभावक गोविन्द थापाले बताए ।
बाँसखर्कमा भएको समस्याबारे कुनै लिखित जानकारी नआएकाले समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढेको र बाहिर हल्ला आएजस्तो समस्या हो भने कार्यालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीले बताए ।
आदित्य दाहाल/ रासस